Keylogger — MYSTERY ZILLION
007 ကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ Keylogger ကိုအခုပြန်သုံးရမရဘူးဖြစ်နေတယ်...
အသစ်များ နှင့် screen capture များ( window7မှာပါသုံးရန် ) ရှိရင် လိုချင်ပါတယ် ...
အလုပ်မှာတစ်ခြားသူတွေက စက်ကို ကလိကြလွန်းလို့ ...
Window7မှာပါတဲ့ ASP.NET Machine Account ကို Wellcome Screen မှာပေါ်အောင် / မပေါ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ .......
Boot Menu အတက်မှာ Save Mode ပေါ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ.. သူများစက်မှာလုပ်ထားတာတွေ့လို့
တက်လို့တော့မဟုတ်ပါကော။။ ဘာလို့သုံးချင်တာလဲ။ ကလိတာကို မကလိစေချင်တာလား။ ဘယ်သူ ကလိသွားလဲသိချင်တာလား။ လုံးလုံးကို လှမ်းကြည့်နေချင်တာလား။ လှမ်းကြည့်ရင်း control လုပ်ချင်တာလား။ မလိုအပ်တာဖွင့်ရင် လှမ်းပိတ်ချင်တာလား။ သူများတွေ လုပ်တာကြိုက်လို့လား။ Save mode လား safemode လား။ ဟီး အိုင်လဲမျက်စိလည်နေပါသကော...